Agromart | Agricultural Marketplace Nepal गोलभेडा खेती गर्ने तरिका – Agromart
गोलभेडा खेती गर्ने तरिका
Q 1. गोलभेडा खेतीमा सेतो झिँगा कस्तो खालको कीरा हो ? यसको प्रकोपले अन्य समस्या पनि आउने सुनिन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
Q 2. गोलभेडामा तालिम र काँटछाँट भन्नाले के बुझिन्छ र कस्ता जातहरुमा तालिम र काँटछाँटको आवश्यकता हुन्छ ?
Q 3. वीमा गरिएको वालीको क्षतिपूर्ति अधिकतम कति प्रतिशत सम्म वीमा कम्पनीले ब्यहोर्दछ ?
बीमित वालीको क्षतिको एकिन गरी अधिकतम ९० प्रतिशत सम्म क्षति ब्यहोर्ने प्रावधान छ ।
Q 4. तरकारी वालीमा वीमा कसरी गरिन्छ ?
खाद्यन्न वाली, तेलहन, दलहन वाली तथा पशुपँक्षिहरुमा जस्तै तरकारी वालीमा पनि वीमा गर्न सकिन्छ । यसको लागि नजिककै वाली वीमा गर्ने कम्पनि तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र कृषि सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गरी यस सम्वन्धि जानकारी लिई वीमा गर्न सकिन्छ ।
Q 5. पर्यावरणिय क्षेत्र (Ecological Belt) अनुसार बेमौसमी गोलभेडा खेती गर्ने उपयुक्त समयहरु कुन कुन हुन् ?
मध्य पहाड (१०००–१५०० मीटर) मा जेठ–असार, बेसि (३००–१००० मीटर) मा असार–साउन र तराई (३०० मीटर कम) मा भदौ महिनामा खेती लगाउने उपयुक्त मानिन्छ ।
Q 6. वजार भाऊ राम्रो भएको वेला गोलभेडा फललाई चाँडै पकाउने कुनै तरिका अपनाउन सकिन्छ कि ?
Q 7. गोलभेडाको वीउ निकाल्न कस्तो अवस्थाको फल टिप्नु उपयुक्त हुन्छ ?
Q 8. प्रशोधनको लागि गोलभेडा कस्तो अवस्थामा टिप्नु उपयुक्त हुन्छ ?
Q 9. टाढा ढुवानी/ वजारको लागि गोलभेडा छनौट गर्दा कस्ता–कस्ता उपायहरु अवलम्वन गर्नु पर्दछ?
Q 10. परिपक्व हरियो तथा पाकेको गोलभेडा कति चिस्यानमा वढीमा कति दिन सम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ ?
परिपक्व हरिया फलहरु १२–१४ डि.से. तापक्रम र ९०–९५% सापेक्षित आर्द्रतामा ७–२१ दिन सम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ भने पुरै पाकेका फलहरु ८–१० डि.से. र उत्तिकै आर्द्रतामा ४–७ दिन सम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ ।
Q 11. फल टिपी सकेपछि कस्तो ठाउँमा राख्नु पर्दछ ?
Q 12. गोलभेडा फल कस्तो–कस्तो अवस्थामा टिप्न सकिन्छ ?
Q 13. राम्रो व्यवस्थापन गरेको गोलभेडा खेतीवाट प्रति रोपनी कति सम्म उत्पादन लिन सकिन्छ ?
Q 14. तरकारीमा प्रयोग गरिने विषादि कुन रंगको हुन कम खतराको संकेत गर्दछ ?
तरकारीमा सकेसम्म घरायसी/जैविक विषादीको प्रयोग गर्न स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुन्छ तर कुनै कुनै अवस्थामा रासायनिक विषादीको प्रयोग नगरी नहुने अवस्था आएमा हरियो रंगको संकेत भएको प्रयोग गर्नु पर्दछ र यसमा लेखिएको विषादी प्रयोग पछि वाली टिप्न/प्रयोग गर्नु पर्ने समयलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नु पर्दछ ।
Q 15. कीटनाशक विषादिको संकेतहरु के के छन् ?
कीटनाशक विषादीहरुको वट्टा/पाकेटहरुमा रातो, पहेलो, निलो र हरियो रंगका संकेतहरु दिइएका हुन्छन् । रातो रंगको संकेतले सवै भन्दा खतरा को संकेत दिन्छ भने क्रमशः घट्दै गएर हरियो संकेत कम जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
Q 16. फल रित्तो हुने (Puffiness/ Hollowness) समस्या/विकृति कसरी उत्पन्न हुन्छ ?
Q 17. फलको टुप्पा कुहिने (Blossom End Root) कस्तो अवस्थामा लाग्दछ र कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
Q 18. गोलभेडाको फल के कारणले फुट्दछ (Fruit Cradking) हुन्छ ? यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ?
Q 19. गोलभेडामा देखा पर्ने अन्य भाइरस रोगहरुबाट वचाउन अन्य विधिहरु के–के छन् ?
Q 20. पात गुजमुज पर्ने (Leaf curl virus) के ले फैलाउँछ ? यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
Q 21. जरामा लाग्ने गिर्खा रोग (Rootnot Nematode) कस्तो हुन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
यो जरामा लाग्ने नेमाटोडको कारणले लाग्दछ । रोगी वोटहरु होचा हुन्छन् तथा पातहरु साना आकारका र पहेँलिएका हुन्छन् । वोटहरु उखेलेर हेर्दा जराहरुमा गाँठाहरु देखापर्दछन्। यसको व्यवस्थापनको लागि यस परिवारको खेती गरिएको जग्गामा तुरुन्तै खेती नलगाउने, उक्त जग्गामा सूर्यमुखीको खेती लगाउने, वेर्ना सार्ने वेलामा १–२ ग्राम कार्बोफ्यूरान + 25 ग्राम नीमको पिना प्रत्येक खाडलमा हाल्ने ।पिनालाई मलको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
Q 22. व्याक्टेरियल ओइलाउने रोग (Bacterial WIlt) कसरी चिन्न सकिन्छ ? यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नु पर्दछ ?
Q 23. फ्यूजारियम ओइलाउने रोग (Fusarium WIlt) कसरी उत्पन्न हुन्छ र यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ ?
Q 24. अगौट र पछौटे डढुवा रोगमा के फरक छ ? यी रोगहरु लाग्न नदिन कुन कुन उपायहरु अवलम्वन गर्न सकिन्छ ?
डढुवा रोग आलु वालीको सवैभन्दा घातक रोग हो । अगौटे डढुवा रोगमा वुढा पातको माथिल्लो सतहमा काला, थोप्लाहरु देखापर्दछन् पछि गएर पात पहेँलिने र सुकेर झर्ने गर्दछ भने पछौटे डढुवा रोगमा शुरुमा पातको किनारा वा टुप्पोमा स–साना खैरो काला दागहरु देखा पर्दछन् र फैलदै जाँदा पुरै पात डाँठ र फलमा समेत लाग्दछ । रोगी दानामा खैरो किसिमको दाग देखिन्छ तथा पछि पुरै दाना कालो रंगको भई कुहेर झर्दछ । रोग ग्रस्त वोट पुरै कहुएको जस्तो देखिन्छ । यस रोगवाट वच्नको लागि गोलभेडा परिवार वाहेकका घुम्ति वाली लगाउने, रोग सहने जातहरु मनप्रेकस, सृजना जस्ता जातहरुको खेती गर्ने, डाईथेन एम–४५, रिडोमिल वा वेभिष्टीन जस्ता विषादीहरु २–३ ग्राम १०–१५ दिनको अन्तरालमा छर्नु पर्दछ ।
Q 25. बेर्ना कुहिने (Damping off) रोग लाग्न नदिन कुन–कुन उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ?
Q 26. लिफ माइनर कीराले गोलभेडामा कतिको नोक्सान पुर्याउँछ र कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ?
Q 27. गबारोको नियन्त्रणका लागि घरेलु तथा रासायनिक उपाएहरु के के छन् ?
Q 28. गवारोलाई हातले नष्ट गर्न नसकिएको अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
Q 29. गवारो भनेको कस्तो खालको कीरा हो ? गोलभेडा खेतीमा गवारोका व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
गवारो एक किसिमको खपटे कीराको लार्भा हो जसले फूल, लार्भा, प्यूपा र वयस्क गरी चार अवस्थामा आफ्नो जीवनी पूरा गर्दछ । लार्भा अवस्थामा यसले गोलभेडालाई प्वाल पारी नोक्सानी पुर्याोउँदछ । गवारोको व्यवस्थापन फुल अवस्था देखिनै गर्नु पर्दछ । यहि फूल अवस्थामा ध्यान पुर्या‍उन सकिएन भने फूलवाट निस्केको लार्भा फलको भेट्नोवाट पसेर र आधा शरीर वाहिर र आधा शरीर भित्र राखेर खाईरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा हातले टिपेर फाल्न सकिन्छ ।
Q 30. छापो दिने/मल्चिङ्ग भनेको के हो ? यसको लागि कुन कुन वस्तुहरु प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ?
छापो/मल्चिङ्ग भन्नाले सुकेको झारपात, पराल, धानको भुस आदि गोलभेडा रोप्ने वित्तिकै माटो माथि छोप्ने प्रकृयालाई जनाउँदछ । आजकल कालो रंगको २०० गेज वा सो भन्दा वाक्लो प्लाष्टिकको छापो लगाउने चलन छ र यो लाभदायक पनि छ ।
Q 31. गोलभेडामा सिचाईको महत्व कस्तो रहन्छ ? कुन कुन अवस्थामा सिचाई गर्नु पर्दछ ?
Q 32. गोलभेडा खेतीमा कस्तो खालको वाली अन्तरवालीको रुपमा लगाउन सकिन्छ ?
गोलभेडा खेती गरिएका ठाउँ खास गरी प्लाष्टिक घर/टेनलमा हरिया सागसब्जीहरु अन्तरवालीको रुपमा लगाउन सकिन्छ ।
Q 33. गोलभेडामा घुम्ती वाली र अन्तरवाली को के महत्व छ ?
गोलभेडा खेती गर्ने जमीनमा घुम्ती वाली लगाउँदा माटोवाट उत्पन्न हुने रोगहरु लाग्दैन । गोलभेडाका अग्लो जातहरु खेती गरिएको ठाउँमा काउली, बन्दा र हरिया सागसब्जी जस्ता अन्तरवाली लगाईएमा प्रति इकाई जमीनबाट वढी आम्दानी लिन सकिन्छ ।
Q 34. गोलभेडा उत्पादन गर्दा मलखादको मात्रा कति दिन आवश्यक हुन्छ ?
Q 35. गोलभेडा फूल फूलेको दिनदेखि फल पाक्न कति दिन लाग्दछ ?
Q 36. गोलभेडा प्याकिङ्ग गर्दा कस्तो कन्टेनरमा राख्नु पर्दछ ?
गोलभेडा विशेषत प्लाष्टिक क्रेट, काठको वाकस, टोकरी वा कार्डवोर्ड वाकसमा प्याकिङ्ग गरिन्छ । ढुवानी गर्दा प्याकिङ्ग गरेका फलहरु भाँडो भित्र हल्लिनु हुँदैन । टाढा ढुवानीको लागि कार्डवोर्ड वाकसमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
Q 37. टाढा बजारमा विक्रिको लागि कुन अवस्थामा गोलभेडा टिप्न उचित होला ?
टाढा वजार विक्रिको लागि विशेषत हरियो परिपक्व फलको टुप्पा भागको रंग हल्का हरियोवाट पहेँलो हरियो रंगमा परिणत भएको हुनु पर्दछ । यस्तो अवस्थाको गोलभेडा भण्डारणका लागि पनि टिप्ने गरिन्छ ।
Q 38. गोलभेडा पाके/नपाकेको कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ ?
Q 39. गोलभेडालाई ढिलो पाकोस भन्नका लागि के गरिन्छ ?
Q 40. गोलभेडा पकाउने विधि के के छन् ?
Q 41. प्लाष्टिक घर/पोली हाउस निर्माण गर्दा कस्तो प्लाष्टिक प्रयोग गर्नु पर्दछ ?
प्लाष्टिक घर निर्माण गर्दा सेतो प्लाष्टिक सीटको प्रयोग गर्नु पर्दछ जसले गर्दा सूर्यको प्रकाश विरुवा पुग्न सकोस् ।
Q 42. तराई र पहाडमा निर्माण गरिने प्लाष्टिक घरहरुमा के फरक छ ?
पहाडमा तयार गरिने प्लाष्टिक घरहरु पुरै ढाकिने गरी वनाईएको हुन्छ भने तराईमा वनाइने प्लाष्टिक घरहरु वरीपरी खुल्ला राखी पानी, असिना आदिवाट वच्ने गरी छानोमात्र लगाइएको हुन्छ । तराईमा वनाइने यस्ता घरहरु भित्र नगुम्सिने खुल्ला हुन जरुरी हुन्छ ।
Q 43. गोलभेडा खेतीको लागि प्लाष्टिक घर निर्माण कसरी गरिन्छ ?
Q 44. वेमौसमी गोलभेडा खेती भन्नाले के बुझिन्छ ?
Q 45. वर्णशंकर जातका विशेषताहरु के–के हुन् ?
Q 46. नेपालमा उत्पादीत गोलभेडाको वर्णशंकर जातको नाम के हो ?
नेपालमा उत्पादित वर्णशंकर गोलभेडाको जात सृजना हो । वर्षौ देखि वर्णशंकरजातको खेती भएता पनि आ.व. २०६७/०६८ मा मात्र यो जात उन्मोचन गरिएको हो ।
Q 47. वर्णशंकर (Hybrid) जात भनेको के हो ?
दुई अलग प्रकृतिका भाले र पोथी जातहरुलाई क्रसिङ्ग गरी विकसित गरिएका जात वर्णशंकर (Hybrid) हो । उन्नत जातको जस्तो वर्षौ सम्म लगाउन सकिन्न यसका वीउ वर्षैपिच्छे फेर्नु पर्ने हुन्छ ।
Q 48. गोलभेडाको डिटरमिनेट र इन्डिटरमिनेट जातमा के फरक छ ?
Q 49. गोलभेडाका जातहरु के के छन् ?
गोलभेडाका मूख्य रुपमा दुई किसिमका जातहरु छन् । पहिला जातहरु जुन होचा (डिटरमिनेन्ट) हुने, दोस्रो किसिमका जातहरुमा वोट अग्लो (इन्डिटरमिनेट) हुने खालका हुन्छन् ।
Q 50. गोलभेडा खेती गर्नको लागि उपयुक्त विउदर प्रति रोपनि कति आवश्यक पर्ला ?
वीउदर जात अनुसार जात अनुसार यसको वीउ दर ५–१५ ग्राम चाहिन्छ । विरुवाको हिसाव गर्दा अग्लो जातलाई १००० र होचो जातलाई १५०० विरुवा प्रति रोपनी लगाउनु पर्ने हुन्छ ।
Q 51. यसको खेती गर्न कस्तो स्थान छनौट गर्न उपयुक्त होला ?
Q 52. गोलभेडामा पाईने उपयोगी मूख्य तत्वहरु कुन कुन हुन् ?
Q 53. गोलभेडा खेतीका लागि कस्तो हावापानी उपयुक्त हुन्छ ?